Welcome kune YEPAMUTEMO YEPAINDANETI OMASKA mukwende.
Travel homwe Bag
Mukwende Cover & Belt
Company ine Langchao Omaska ​​Balmatik sezvo yavo muchiso uye anoshandira pamwe nevamwe yakakurumbira muchiso mutengi.
On zvigadzirwa, yakaoma unhu mitemo unosimbiswa kubva kukura kusvika kugadzirwa kuti zvigadzirwa kuva zvakanakisisa. On basa, akasiyana vatengi vanobva kunyika dzakasiyana uye nharaunda Vanogutswa dzose nguva.
Company anoramba kukwira nguva uye innovates nokuda kumusika. Products changed kuti siyana catagory pane mhando imwe chete. Munhu zvichienderana mirairo zvinobvumidzwa pachinzvimbo zvirevo vakawanda chete.
Vakazvitsaurira kuna chipiriso vatengi akanakisisa zvinhu uye basa, Mashoko wedu "With Our Platform kuna Nyota More People, With Our Products kuna Batsirwa More Customers"!
"Kuita zvose chigadzirwa nokungwarira, Kushumira ose mutengi vakanyatsoteerera" ndiyo achitungamirirwa Tianshangxing chikwata. Yepamusoro yakanaka mutengo zvigadzirwa ndivo chinangwa chisingagumi Tianshangxing ari kushanda. Tinotenda kuti boka revanhu vane zvinangwa uye hope achasika zvishamiso. Ngatiteererei vanobatana maoko uye kuti kubudirira kukuru pamwe chete. Tiri munzira dzose nguva!
Factory address: NO.12 Yanling road, Qunyu mumugwagwa, CT muchina maindasitiri paka, Baigou muguta, (Gaobeidian guta) Baoding guta, Hebei dunhu, China.
Pedyo yendege: Tianjin Binhai Airport (kana Beijing guta Airport)
Zvinotora 3hours kubva TIANJIN kana Beijing Airport kuti fekitari nemotokari
Pedyo chiteshi: Baigou chiteshi (kana Gaobeidian mabvazuva chiteshi)
Zvinotora 20minutes kubva Baigou stationt kuti fekitari nemotokari
Zvinotora 40minutes kubva Gaobeidian mabvazuva yemapurisa fekitari nemotokari
Factory kuonana munhu: Mr. Allen (okutengesa maneja)
Factory Address : 12, Yanling Road, West Xingsheng Street, Baigou Town, Baoding, Hebei, China (Mainland)